Galmudug oo ka hadashay dagaalkii ka dhacay degaanka Bacaadweyne - Awdinle Online
Saacadihii la soo dhaafay ayaa waxaa dagaal culus oo geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaa uu Ciidamo ka tirasn kuwa dowladda iyo Al-Shabaab uu ku dhex-maray degaanka Bacaadweyne ee gobolka Mudug.
Dagaalka ayaa yimid, kadib markii saacadihii hore ee saaka ay weerar ku qaadeen Al-Shabaab Saldhiga Ciidamada qeybta 21aad ay ku leeyihiin degaanka Bacaadweyne, waxana halkaasi ka dhacay dagaal geystay khasaro dhimasho iyo dhaawac ah.
Guddoomiyaha gobolka Mudug ee Maamulka Galmudug Cabdiraxmaan Diiriye Isxal ayaa sheegay in weerarka ay Al-Shabaab ku qaadeen degaanka Bacaadweyne ay Ciidamada Dowladda iska difaaceen, isla markaana ay khasaaro ku gaasriiyen.
Dhinaca kale waxaa uu sheegay in Boqolaal dad Shacab ah ay ka barakaceen degaanka Bacaadweyne ee lagu dagaalamay, waxaana uu ku baaqay in dadkaasi barakacay loo gurmaday.
Waxaa uu u mahad celiyay Shacabka degaanka Bacaadweyne garb istaaga ay u muujiyen Ciidamada, isla markaana ay qeyb ka ahaayeen sidii la isaga difaaci lahaa Al-Shabaab.
Galmudug si faah faahsan uma sheegin khasaaraha ka dhashay dagaalka ka dhacay degaanka Bacaadweyne ee Koonfurta Gobolka Mudug, hayeeshee wararka la helay ayaa waxaa ay sheegayaan in ku dhawaad 20 Ruux
Previous articleXildhibaano ugu baaqay Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland in uu is casilo
Next articlePuntland oo joojisay in Canshuurta Dekadda Boosaaso lagu qaado Shillin Soomaali